3IN 1NC Servo Feeder Machine ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China 3IN 1NC Servo Feeder Machine Factory
ခြောက် Axis စက်ရုပ်စီးရီး
TNCF4-series 3IN INC Servo Feeder စက်
TNCF3-series 3IN INC Servo Feeder စက်
TNCF5-series 3IN INC Servo Feeder စက်
ဝိသေသလက္ခဏာများ ၁။ leveling ညှိနှိုင်းမှုသည်အီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ် display meter ဖတ်ခြင်းအားလက်ခံသည်။ 2. မြင့်မားသောတိကျစွာဝက်အူအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်လမ်းသွား handwheel အားဖြင့်မောင်းနှင်သည် width ကိုညှိနှိုင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်; 3. အစာကျွေးခြင်းမျဉ်း၏အမြင့်မော်တာမောင်းနှင်ဓာတ်လှေကားအားဖြင့်ချိန်ညှိသည်, ၄။ ပစ္စည်းစာရွက်အတွက်ဆွန်းကြိတ်ပိတ်ဆို့သောကိရိယာနှစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ ၅။ Feeding roller နှင့် correction roller များသည်မြင့်မားသောအလွိုင်းရှိသောသံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း (hard chromium plating treatment); 6. ဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်လက်မောင်းကို device ကို; ၇ ။
TNCF6-series 3IN INC Servo Feeder စက်
TNCF7-series 3IN INC Servo Feeder စက်